सिरियामा यसरी सुरू भएको थियो गृहयुद्ध, अहिलेको नरसंहारमा अमेरिका , रुस दुवै दोषी – Nepali Audio Video
सिरियामा यसरी सुरू भएको थियो गृहयुद्ध, अहिलेको नरसंहारमा अमेरिका , रुस दुवै दोषी
केही दिनयता सिरियामा भएको युद्धका हृदयविदारक र विभत्स तस्वीर सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएका छन्। यस्तो नरसंहारका लागि कतिपयले अमेरिका वा रुसलाई दोष दिएका छन्। अत्यन्त क्रुर यो युद्ध सुरु भएयता ४ लाख ६५ हजार मानिसले ज्यान गुमाइसकेका छन् र युद्ध सुरु हुनुअघिको सिंगो जनसंख्याको आधा हिस्सा अर्थात् करिब १ करोड २० लाख मानिस विस्थापित भएका छन्। आगामी मार्च महिनामा यो युद्ध आठौँ वर्षमा प्रवेश गर्नेछ, तै पनि युद्ध अन्त्य हुने छाँट छैन र सबैभन्दा दुःखद् कुरो यो युद्धको दोषी यही हो भनेर स्पष्टसँग छुट्याउन सकिने अवस्था छैन। सिरियाको अवस्था कसरी यस्तो भयो त?
सन् २०११ मा सुरु भएको ‘अरब स्प्रिङ’ मा ट्युनिसिया, इजिप्टलगायतका देशका शासनव्यवस्था उल्टिए। यसबाट सिरियाका आन्दोलनकारी पनि आशावादी बने। करिब सवा दुई करोड जनसंख्या रहेको सिरियामा सन् १९७१ देखि असद परिवार शासनमा रहँदै आएको छ। पहिले हाफिज अल असद र अहिले बसर अल असद। पछिल्लो समय असद शासनप्रति केही हदसम्म असन्तुष्टि बढेको थियो।
मार्च २०११ मा अरब स्प्रिङको पक्षमा भित्तेलेखन गर्ने १५ जना केटाहरु पक्राउ परेपछि सिरियामा प्रदर्शन सुरु भयो। तीमध्ये एक १३ वर्षीय किशोरको यातनापछि हत्या पनि भयो। अप्रिल महिनामा प्रदर्शन बढ्दै गएपछि सेनाले प्रदर्शनकारीहरुमाथि गोली चलाउन थाल्यो। सैयौँको मृत्यु भयो।
सोही वर्षको जुलाईमा फ्री सिरियन आर्मी नामक लडाकु दस्ताको गठन भयो। सो दस्ताले सशस्त्र युद्ध सुरु गर्‍यो। तर यो युद्ध सिरियाभित्रका पक्षहरुबीच मात्र सीमित रहेन। केही समयमै यसमा क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्वार्थसमूहरुले खेल्न थाले।
यस्तै समूहमार्फत् सिरियामा हतियार र पैसाको ओइरो लाग्न थाल्यो। जसका कारण टोलटोलमा सशस्त्र मिलिसिया गठन हुन थाले। तीमध्ये कतिपय समूहहरुलाई राजनीतिको कुनै चासो थिएन। थुप्रै पैसा कमाउन मात्र लडिरहेका र कमजोरहरुमाथि अत्याचार गरिरहेका थिए। कतिपय आआफ्नो धार्मिक उद्देश्य पूरा गर्न लागिपरेका थिए।
धार्मिक रुपमा सिया बहुसंख्या रहेका इरान, इराक र लेबनानको हेजबुल्लाहले असदलाई समर्थन गरे भने टर्की, साउदी अरब, कतार लगायतका सुन्नी बहुसंख्यक राष्ट्रहरुले फ्री सिरियन आर्मीलाई समर्थन गरे।
अमेरिकाले सुरुदेखि नै विद्रोहीहरुलाई समर्थन गर्दै आएको थियो। ओबामा प्रशासनको निर्देशनमा सिआइएले गृहयुद्धको सुरुवातदेखि नै फ्री सिरियन आर्मीलाई हतियारबाहेकको सहयोग गर्दै आएको थियो। आफूले प्रत्यक्ष हतियार नदिए पनि सिआइएले बेलायत, साउदी अरब र कतारसँग सहकार्य गरेर लिबियाबाट सिरियामा हतियार भित्र्याउन पहल गरेको थियो। तर २०१३ बाट भने सिआइएले औपचारिक रुपमै असद विरोधी समूहहरुलाई खतरनाक हतियार उपलब्ध गराउन थाल्यो।
सन् २०१४ मा इस्लामिक स्टेटको स्थापनापछि त अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयले नै अर्बौँ डलर खर्च गरेर सिरियाका विभिन्न समूहहरुको सशस्त्रीकरण गरिरहेको छ।
स्लामिक स्टेटले इराक र सिरियाको ठूलो हिस्सा आफ्नो कब्जामा लिएको थियो। यसको विरुद्धमा लड्ने भन्दै अन्य शक्तिहरुले पनि हाकाहाकी सिरियामा प्रवेश गरे।
अमेरिकाले सिरिया सरकारमाथि रासायनिक हतियार प्रयोग गरेको आरोप पनि लगाउँदै आएको छ।
एकातिर अमेरिकाको सहयोगमा विद्रोहीको आक्रमण र अर्कोतिर इस्लामिक स्टेटको आक्रमण भएपछि असद टिक्न नसक्ने अवस्थामा पुगे। उनको फौज युद्ध हार्दै जान थाल्यो। यस्तोमा उनी रुस गुहार्न पुगे।
सेप्टेम्बर २०१५ मा यो युद्धमा रुस पनि सहभागी भयो। सिरियामा रुसले असदलाई खुट्टा टेकाउने र इस्लामिक स्टेटलाई हराउने उद्देश्य राखेको थियो। दुवै उद्देश्यमा रुस केही समयभित्रै सफल भयो। रुसले इस्लामिक स्टेटमाथि मात्र होइन, विद्रोही समूहमाथि पनि बम वर्षा गर्‍यो, फलस्वरुप आइएस र विद्रोही हार्दै जान थाले भने असदको सरकार पुनः बलियो हुँदै गयो।
गत डिसेम्बरमा रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले सिरियाबाट आफ्नो फौज हटाउने आदेश दिए। त्यसयता केही सैनिक फिर्ता पनि हुन थालेका छन्। तर पछिल्लो समय चर्केको युद्धका कारण रुस सम्पूर्ण रुपमा सिरियाबाट हट्नसक्ने परिस्थिति बनेको छैन।
अहिले सिरियाको बढीजसो भूभाग असद नेतृत्वको सरकारको नियन्त्रणमा छ। तर युद्ध टुंगिहाल्ने अवस्था किन छैन भने अझै ठूलो हिस्सा कुर्दहरुको नियन्त्रणमा छ भने केही हिस्सा विद्रोहीहरुको नियन्त्रणमा छ।
राजधानी दमास्कसनजिकैको पूर्वी गुटा पनि विद्रोहीहरुको नियन्त्रणमा छ तर उनीहरु वर्षौँदेखि सरकारी सेनाको घेरामा छन्। घेरामा रहेका करिब ४ लाख बासिन्दालाई सरकारले ठाउँ छोड्न भनिरहेको छ। तर विद्रोहीहरुले उनीहरुलाई बाहिर निस्किन दिएका छैनन्।
त्यहाँका बासिन्दालाई खानालगायतका अत्यावश्यक सामग्री आपूर्ति गर्न सकिने अवस्था पनि छैन।
पछिल्लो समय अमेरिका, इजरायल, आदिले सरकार नियन्त्रित क्षेत्रहरुमा मनलाग्दी बमबारी गर्दै आएका छन्। सोही क्रममा फेब्रुअरीको मध्यमा सिरियामा कार्यरत केही व्यक्तिको अमेरिकी आक्रमणमा परी मृत्यु भयो।
कतिपयले पूर्वी गुटामा सिरिया सरकारको पछिल्लो आक्रमण त्यसैको जवाफ भएको तर्क पनि गरेका छन्। इरानलगायतका राष्ट्रले पनि आफ्ना समूहहरुलाई सिरियाभित्रै पठाएर सञ्चालन गरिरहेका छन्।
यतिबेला आफूले पाएको सफलतालाई कसरी पूँजीकृत गर्ने भन्ने ध्याउन्नमा रुस रहेको छ भने गत दशकमा आफ्नो प्रलयकारी विदेशनीतिको असफलतालाई छोप्न मात्रै पनि सिरियामा रुसलाई सफल हुन नदिने प्रयासमा अमेरिका छ।
सिरियामा युद्धविराम गर्ने अनेकौँ प्रयास भएका छन्। तर अमेरिकाले शान्तिका लागि असदले सत्ता छोड्नुपर्ने सर्त राख्दै आएको छ। सिरियामा यतिबेला सबैभन्दा शक्तिशाली देखिएका असदले सत्ता छोड्ने कुनै मनसाय देखाएका छैनन्। बरु सिरियामा अमेरिकी भूमिका पहिले हेरी कम हुँदै गएको छ।
पूर्वी गुटामा भएको आक्रमण रोकेर युद्धविराम गर्न संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषदले एक प्रस्ताव पारित गरेको छ। यद्यपि त्यसपछि पनि आक्रमण रोकिएको छैन। संयुक्त राष्ट्रसंघमा युद्धविरामको घोषणा गरिएपनि त्यसलाई विद्रोहीहरुले मान्छन् कि मान्दैनन् भन्ने स्पष्ट नरहेको रुसले बताउँदै आएको छ।
त्यहाँ मारिएका र घाइते भएका कैयौँ बालबालिकाको तस्वीर बाहिरिएका छन्। करिब पाँच सयको हाराहारीमा मानिस मारिएका छन्। यसलाई संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेर्रेसले ‘पृथ्वीको नर्क’ को संज्ञा दिएका छन्। आक्रमणको चपेटामा परेकी एक बालिकाले ‘कम्तीमा स्वर्गमा खाना त पाइन्छ,’ भन्दै गरेको भिडियो सुन्दा यो भनाइसँग सहमत नहुने ठाउँ देखिँदैन।
उता टर्कीसँगको सीमावर्ती क्षेत्रमा वाइपिजी नामक कुर्दिश लडाकु संगठनविरुद्ध टर्की र फ्री सिरियन आर्मीले नयाँ आक्रमण सुरु गरेका छन्।
रक्तपातको दोष कसको थाप्लोमा?
सिरिया युद्धको सबैभन्दा जटिल पक्ष नै यही हो। यहाँ को कुन पक्षसँग लडिरहेको छ, भन्ने स्पष्ट छैन। यो युद्धमा विश्वका महाशक्तिहरु अमेरिका र रुसबीचको छद्म युद्ध पनि देख्न सकिन्छ। धार्मिक अतिवादी, आतंकवादी लुटेरा समूहदेखि लिएर असदका बफादार सैनिकहरु पनि उत्तिकै अमानवीय अत्याचारमा सहभागी छन्। विद्रोही समूहहरुबीच एकले अर्कालाई आतंकवादीको आरोप पनि लगाउने गरेका छन्। कसले कसका लागि लडेको र कसको उद्देश्य के हो भन्ने स्पष्ट नहुँदा यो अत्यन्त जटिल युद्ध बनेको छ।
त्यसमाथि महाशक्तिहरुले युद्धअभ्यास गर्ने र एकअर्काको शक्ति जाँच्ने अवसरका रुपमा सिरियालाई लिएका छन्। विश्वमा शान्ति, मानवअधिकार, न्यायजस्ता कुरामा आवाज उठाउँदै आएकाहरु पनि सिरियाको मामिलामा निष्प्रभावी बनेका छन्। जसको मूल्य त्यहाँका निर्दोष बालबालिकाले चुकाउनु परिरहेको छ।
केही वर्षयता सफल देखिएको पुटिनको रणनीति पनि टर्कीले चालेको पछिल्लो कदमबाट अप्ठ्यारोमा परेको छ। त्यसमाथि सिरियामा इरानको उपस्थितिलाई इजरायलमाथिको खतराको रुपमा अथ्र्याउने कोसिस पनि भइरहेको छ। त्यसैले सिरियाको द्वन्द्व तत्काल अन्त्य हुने छाँट नरहेको विश्लेषकहरु बताउँछन्।
सोमवार, फाल्गुन १४, २०७४ मा प्रकाशित